Home > Soomaali > Dugsi Hoose & Dhexe > Shan Jirsan
Shan Jirsan (High Five) waa barnaamij u diyaariya caruurta xanaanada iyadoo diirada la saarayo cunuga gabi ahaanba.
Macalimiintu waxay caruurta ka caawiyaan la dhaqanka iyo dhexgalka bulshada iyo kobcinta maskaxda si ilmuhu ay u fahmaan naftooda iyo awooda ay leeyihiin. Sidoo kale maclimiintu waxay ka caawiyaan caruurta sidii ay u baran la’haayeen xirfada bulshanimo si ay markaa u awoodaan in ay la samaystaan xidhiidh caafimad qaba caruuraha kale iyo dadka waa-weynba.
High Five-ka manhajkiisa waxaa lugu soo ururiyay sadex walxood oo aasaasi ah:
Wax-wada barasho: Abuurid dareen wax wada barasho ee ay yeeshaan ardayda beesha iyadoo lugu adkeenayo in ay noqdaan masuul, dhagestayaal, iyo la hadal midba mid ka kale, iyo su’aalo is waydiin iyadoo qofba markiisa qaadanayo.Waxaa kuwaa ku jiri doona Luuqada, iyo sugaanta, Xisaabta, Sayniska, iyo wax-qabadyo barashada cilimga bulshada ah.
Wax-barasho fir-fircoon: Caruurta yar-yar sida ugu fiican ay wax ku bartaan waa khibrada ay ka helaan gacmaha dadka, shayada, dhacdooyinka, iyo figradaha. Caruurta waxaa lugu dhiiri galiyaa in ay dhisaan cilmi qoto-dheer iyagoo kaashanaya isku fil-naan iyo khibrada kooxo kooban.
Dib u barasho: Kulmo ay caruurtu ku kulmaan ayagoo aad isugu soo dhaw si ay u wadaagaan khibradaha iyo figradaha, taas oo ay ka heleen maalinimadii waxay barateen. Aalaaba, tani waa xiliga dib loo akhriyo sheekaayinka ama sheekada labaad ee kor loo wada khariyo.
High Five waa barnaamij maalin badhkeed ah ( 2 saacadood iyo 45 daqiiqo) waxaana bixiya intooda badan Iskuulada Dad-weynaha ee Minneapolis. Si aad u hesho liis dhamaystiran oo barnaamijyada High Five, waxaad la xidhiidhaa Xarunta Diiwaan Galinta Ardayda. High Five ma ah barnaamij bilaash ah, waxaana la qiimenayaa qoyska dakhligiisa waxaana la eegayaa qoysaska u qalma. Qofna looma diidi doono hadeeysan awoodin ineey bixiyan lacagta
Adeegyada Barashada luuqada Ingiriiska